အခက်အခဲများအား ကျော်လွှားခြင်း: အခက်အခဲ
အခက်အခဲများအား ကျော်လွှားခြင်း
နံပါတ်တစ်ကတော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ ပြာသိုလပြည့်နေ့ဆိုတော့ ဥပုတ်စောင့်တယ် .... ဘုန်းကြီးကျောင်းတော့မသွားပါဘူး၊ အိမ်မှာဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သီလယူလိုက်ပါတယ်...၊
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဥပုတ်စောင့်တယ်၊ ငါကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုပြီး၊ ကောင်းသော ၊ မင်္ဂလာရှိ၊ အကြောင်းအရာတွေ တွေ့ရမယ်၊ ကြုံရမယ်ဆိုပြီး ၊ စိတ်ထဲက မျှော့်လင့်ထားတာပေါ့၊
ဒါပေမဲ့ မဟုတ်ဘူးဗျာ့ .... အဲဒီမှာ မနက်ကတည်းက သီလယူ၊ တရား အနည်းအကျဉ်း မှတ် နေတုန်း၊ ဖုန်းက ၀င်လာပြီ၊ အလုပ်က စရှုပ်ပြီ၊ စိတ်မဖြောင့်တော့တာနဲ့ ၊ ဆက်ပြီး မမှတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး၊ တခါ သေးငယ်ကိစ္စတွေက တပြုံကြီး ရှုပ်ထွေးပြီး၊ ရောက်လာတာ ခု ကျွန်တော် ဒီပို့(စ်)တင်တဲ့ အချိန်မှဘဲ ....
ဒီနေ့ အိမ်ကဖုန်းလာတယ် .... အမေနဲ့ ဖုန်းမပြောရတာ အတောကြာနေပြီဗျာ ... ကျွန်တော့ အကျင့်က တမျိုး၊ ဖုန်းတော့ ပြောချင်တယ်၊ ပြောဖိုကြိုးစားတိုင်း၊ အဆင်မပြေတာ၊ တခုခုပေါ့ဗျာ ၊ ဖြစ်လာပြီဆို ဖုန်းမ ခေါ်ဖြစ်တော့ဘူး၊ အမေရဲ့ အဆုံးအမလေး နာခံရတာပေါ့....
ခု ကျွန်တော့စာကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .... ၊
ကျွန်တော် လုပ်ချင်တာတွေက များတယ်....၊ လောဘကြီးတယ်လို့ပြောရမလား၊ မသိဘူး၊ ကျွန်တော့ ဆန္ဒကို မနေ့က ပို့(စ်)မှာ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ၊
အဲတော့ ကျွန်တော် လိုအပ်နေတာက၊ ကျွန်တော့ ဆိုက်လေးကို (Forum) ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ချင်တာပါ၊ ဒီဆိုက်လေးမှာ ကျွန်တော် ဆရာကြီးလုပ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ချင်တာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ ဘလော့ နည်းပညာတွေ ကျွန်တော့ မရသေးဘူးဗျာ၊ အဲဒါကြောင်းမလို့ ၀ိုင်းဝန်းပြီး ကူညီကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်.....။
အားလုံး .... အခက်အခဲများကြားထဲက သင်ခန်းစာယူပြီး မနက်ဖန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်း
Posted by Zayyar Ting at 1:26 PM
ကွန်ပျူတာ ခေတ်ပြောင်း တော်လှန်မှု (တော်လှန်သော ကွန်ပျူတာများ)
သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်၊ ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ခေတ်၊ မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ အရင်းရှင်ခေတ်၊ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်၊ ကွန်မြူနစ်ခေတ်ဆိုပြီး လူ့သမိုင်းဟာ ခေ...
Deep Freeze နှင့် နှစ်ရက်တာ
Deep Freeze Program က အစွမ်းထက်သားဗျာ့ ခံလိုက်ရတာ မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ၊ Wifi ချိတ်ထားတော့ Program တွေ Update တောင်းတော့ပေးလိုက်တယ်၊ ကွန်...
ငြီးငွေ့တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းကြုံဖူးကြလိမ်မည်ထင်ပါသည်။ ငြီးငွေ့တယ်ဆိုတာ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ကုန်သွားတာ၊ ဘာမှမလုပ်ချင်တော့တာ၊ ဘာလုပ်လုပ်မပျော်...
တစ်ခါတစ်လေ ကျနေတို့ သေချင်စိတ်ပေါက်နေကြတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သေသွားရင် အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်လို့ဘဲ၊ ဒါဆိုမိတ်ဆွေပြောသလို သေသွားရင် တကယ်အဆင်ပြေ...
ကျနော်တို့၏အတွေးများသည် ရံခါပေါ်ထွက်လာကြသည် ရံခါလုပ်ဆောင်စရာများကို ဆုံးဖြတ်ထားကြသည် သို့သော် ထိုအတွေးများသည် ပြတ်တောက်သွားသည် ထိုအတွေးများ...
ဟက်ကာ တစ်ယောက် ဖြစ်ရန် နည်းလမ်း
၁။ Networking TCP/IP, Basic Information gathering, Proxies, Socks, SSL, VPN, VPS, RDP, FTP, POP3, SMTP, Telnet, SSH အစရှိတဲ့ Ne...
1G,2G,3G,4G တို့၏ အခြေခံကြသော ကွဲပြားမှုများ
အခြေခံအားဖြင့် G ဆိုသည်မှာ ပိုမိုမြန်ဆန်သော လိုင်းဆွဲအားကို ရည်ညွှန်း ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ 1G ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံးသော ကြိုးမဲ့ ဖုန်းပြောခြ...
Eassy On the Role Of Computers in Everyday Life
The computer is one of the most brilliant gifts of science. This device was originally developed by Charles Babbage. Most countries ha...
နံပါတ်တစ်ကတော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ ပြာသိုလပြည့်နေ့ဆိုတော့ ဥပုတ်စောင့်တယ် .... ဘုန်းကြီးကျောင်းတော့မသွားပါဘူး၊ အိမ်မှာဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သီလယူလု...
အခြား Links များ